पूर्व राजा परिवार सहित किन जाँदैछन् थाइल्यान्ड?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पूर्व राजा परिवार सहित किन जाँदैछन् थाइल्यान्ड?
काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह डेढ महिनापछि शुक्रबार पुन थाइल्याण्ड जाँदैछन्। थाइल्यान्डबाट उनीहरु श्रीलंका र भारतकोे आर्थिक राजधानी मुम्बई जाने कार्यक्रम तय भएको छ।
दुई साता थाइल्यान्ड बसेर श्रीलंका जाने तयारीमा रहनुभएका पूर्व राजपरिवार थाइल्यान्ड भ्रमणको बस्दोबस्ती मिलाउन बुहारी हिमानी बिहीबार नै त्यहाँ बैकक पुगेकी छन्।
हिमानीका निजी सचिव स्मिता सिह, पूर्वराजका सहयोगी हस्तबहादुर मल्ल, केही भान्छे, सुसारे र नानीसहितको टोलीका साथ हिमानी थाइल्यान्ड पुगेकी हुन्। उनीहरूसँगै राजा ज्ञानेन्द्रका निजी सचिव सागर तिमल्सिना, वालसखा प्रभु शम्सेर राणा, साला उदय शम्सेर राणा र उनकी धर्मपत्नी रोशनी राणा पनि जाने भएकी छन्।
थाइल्याण्डबाट श्रीलंका र भारत जाने
स्रोतका अनुसार श्रीलंका र भारतमा उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। थाइल्यान्डमा ज्ञानेन्द्र, कोमल ,निजी सचिव सागर तिमल्सिना मात्रै जाने कार्यक्रम रहेको छ। पछिल्लो समय थाइल्यान्डलाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाई विभिन्न मुलुकको भ्रमण गर्न थालेका पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपालबाट भारत लगायतका मुलुक भ्रमण गर्दा बढी हल्लिखल्ली हुने भएपछि थाइल्यान्ड हुदै विभिन्न मुलुकको भ्रमण गर्न थालेका हुन्।
नातिनिद्वय पुर्णिका र किर्तिकालाई भेट गर्न भन्दै थाइल्यान्ड जाने गरेका उनले थाइल्यान्ड हुदै विभिन्न मुलुक भ्रमण गर्ने गर्ने कार्यक्रम रहेकाे स्राेतले जनायाे। ज्ञानेन्द्र परिवार दशैको फुलपातिको दिन मुम्बइ हुदै नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ। दशै लगत्तै पुन विदेश भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतको भनाइ छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिक